Tsy Misy Taratasy, Tsy Misy Jiro, Tsy Misy Vaovao: Mbola Mihamafy Hatrany Ny Fanarahamaso Ny Vaovao Ao Venezoelà · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Laura Vidal, Marianne Díaz Hernández Nandika (fr) i Abdoulaye Bah, Sylvia Aimée
Voadika ny 15 Jolay 2018 14:30 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Français, 繁體中文, عربي, Deutsch, English, Italiano, Nederlands, English
Antsipirihany amin'ny sary an'i Eduardo Sanabria miresaka ankolaka ny fanivanana atao amin'ireo media sy ny fanivanantena ao Venezoelà. Nampiasaina nahazoana alalàna.
Teo anivon'ireo fihetsiketsehana nitara be ho valin'ireo krizy ara-tsosialy, ara-politika ary ara-toekarena ao Venezoelà, nahatratra ny faratampony indray ny fanarahamaso ataon'ny Fanjakana amin'ny fampahalalam-baovao.
Tamin'ny Jona 2018, hitan'ireo Venezoeliàna fa voasakana ireo gazety anaty tambajotra , ireo vohikala ahitana sary vetaveta ary ny fantsona Tor, izay toa hetsika farany amina tetikady iray tsy mitsahatra ny mivoatra hikendrena ny hamerana ny fahazoana vaovao ho an'ireo vahoaka marobe .
Lava sy tsy miovaova ny lalàna. Nitatra tonga aty amin'ny an'i Nicolás Maduro ilay zavatra izay nanomboka niaraka tamin'ireo famerana ny fahazoana mandray ireo onjampeo sy fahitalavitra fony yeo ambany fitantanan'i Hugo Chávez : ireo mpampiely onjampeo sy rantsana fampahalalam-baovao an'ny tsy miankina fahiny dia nikisaka ho amina lasitra iray izay ananan'ny Fanjakana fanarahamaso akaiky na miafina amin'ireo asa fanontàna sy ara-barotra.
Fanampin'izay, tamin'ny 2017, ny Antenimeram-pirenena ho Fanorenana an'i Venezoelà (ANC) – izay niantsoroka an'ireo fahefana mpanao lalàna izay taloha dia an'ny Antenimieram-pirenena mpanao lalàna – dia nandany lalàna iray nahabe resaka mikasika ny fandrindrànna an'ireo media sosialy izay manasazy na misintona ireo fahazoandalana hivoaka raha vao misy trangana “fanindrahindrana fankahalana”. Tahaka ny efa mihatra ilay fepetra, araka ny fahitàna ny trangamanjo ireo olona nofonjaina vokatry ny bitsika iray nalefany .
Hatramin'ny 2014, ahitana an'ireo tsy fahampiana miverimberina momba ireo entana sy asa fototra ny krizy ankehitriny, sahala amin'ny taratasy, herinaratra ary aterineto haingam-pandeha. Ireny tsy fahampiana ireny mifamatotra amin'ireo asa mitetika ny hametra ny fahazoan'ny daholobe vaovao dia niteraka tontolo henjana sy voaara-maso fatratra eo amin'ny serasera sy ny fizaràna.
Mikisaka ho ety anaty tambajotra ireo gazety… ary dia voasakana
Miaraka amin'ny fisondrotry haingan'ny vidina taratasy fanaovana gazety sy ny efa tsy fahitana ny taratasy ihany koa, ireo gazety eo an-toerana (anisan'izany ireo mpitsikera ny governemanta) dia voatery mikatona na mifindra ho anaty tambajotra, izay tsy ananany antoka akory ny hahatazonana ny mpanjohy azy ireo. Tamin'ny fiandohan'ny 2018, mpanao gazety iray no nibitsika hoe:
Voasakana amin'ireo toerana marobe ao Venezoelà ny gazety El Nacional, araka ireo vaovao.
Hitako ankehitriny fa [ireo gazety mpiseho isanandro] El Nacional, La Patilla ary ireo vohikala hafa “manorisory” ny mpanao didy jadona dia voasakana avokoa ao amin'ny solosainako. Manana olana sahala amin'io koa ve ireo hafa? Tokony ho ambarantsika ireny tranga ireny.
Volana maromaro taty aoriana, tamin'ny fiandohan'ny Jona, El Nacional, iray amin'ireo gazety tena manandanja indrindra eo amin'ny firenena, no voasakana indray araka ny voalazan'ireo mpanao gazety teo amin'ny Twitter sy ireo loharano hafa:
Toy izany ny fahitàna ny El Nacional ao anatin'ireo lohamilina CANTV (mpamatsy fidirana amin'ny aterineto tena manan-danja indrindra): voasakana. pic.twitter.com/PeGyfuXgPM
“Tsy resaka sary vetaveta akory izany, fa fanakànana”
Espacio Público, fikambanana iray miaro ny fahalalahana maneho hevitra sy fahazoana vaovao, no nitatitra avy amin'ny kaonty Twitter-ny fa nosakanan'ilay mpamatsy aterineto ho an'ny daholobe CANTV ny fidirana amin'ireo vohikala misy vontoatiny, manana endrika firaisana ara-nofo, toy ny Pornhub sy Youporn.
Nisarika ny sain'ny daholobe sy ny gazety ilay fepetra, avy ao anatiny sy ivelan'ny firenena. Nizara ny heviny ireo mpiasan'ny media, mikasika ny fijery feno fangejana ny ara-maoraly sy ny fahamendrehana:
Ny fanontaniana apetraka dia ny hoe: ahoana no nahatongavantsika eo amin'izao toerana izao? N'iza n'iza araka ny lojika dia hilaza fa rafitra iray ny ‘chavisme’ izay, miadana nefa azo antoka, fa misalovana ao anatin'ireo lafim-piarahamonina rehetra. Na dia tsy maro aza izy ireo, ataon.dry zareo anjorony mba hamenoany ny fifehezany ny fiarahamonina.
Haingana tamin'ny fandalinana ny tena fidadasik'ilay fepetra sy ny fifandraisana tery misy aminy sy ny sivana anaty tambajotra ireo mpampiasa aterineto hafa, ahiahy iray hita, tsy ao Venezoelà irery ihany:
Ny olana eto dia tsy ny fisakanan'izy ireo an'ireo pejy misy sary vetaveta akory – izay efa loza rahateo – , ny olana hiantraika hatrany amin'ireo pejy hafa ny fisakanana. Inona no tombontsoa azon'izy ireo amin'ny fibahanana an'ireo pejy misy sary vetaveta? Andramo sakanana ireo pejy, angamba mety ho ny YouTube no manaraka.
Na izany aza, miahiahy ireo mpampiasasasany hoe sady tsy resaka vetaveta io no tsy sivana. Ho azy ireo, ny olana dia ny ‘bande passante’, sy ny tsy fahafahana mandoa an'io.
Ny fisakanana ataon'ny CANTV [mpamatsy aterinetoeo amin'ny firenena sy ny finday ao Venezoelà] an'ireo pejy Web vetaveta dia tsy resaka fahamaotinana na hoe fitiavan'ny governemanta hiaro an'ireo ankizy. Fa ny tena antony dia satria tsy manambola handoavana ny ‘bande large’ tokony ho izy amin'ny fidirana Aterineto, izay mitentina 0,30 dolara ny Venezoeliàna.
Inona ireo safidy? Afaka manampy i Tor… na tsia
Tor, rindrambaiko malalaka ampiasaina mba hitetezana ny tranonkala amin'ny fomba tsy mitonona anarana izay nahafahan'ny mpampiasa aterineto marobe mahazo Aterineto tsy misy ahiahy, dia voasakana ihany koa, araka ny voalazan'ireo vavolombelona isankarazany ato amin'ny tambajotra.
Toa mitranga amin'ny fomba nitsitaitaika ny sakana atao an'ireo fihaonandàlan'ny tambajotra Tor ary tsy mahomby mihitsyaraka izany. Na izany aza, nanamafy ireo fikambanana toa ny Acceso Libre na ny VE Sin Filtro fa voasakana ny Tor ary nanolotra vahaolana izy ireo mba hampihenana ny fetra:
Azonay hamafisina fa voasakana ny Tor (amin'ny fidirana mivantana). Afaka mampiasanreo ny @torproject miaraka amin'ny fiampitàna (fitaterana afaka atsofoka).
Misy filazana fisianà sakana mankamin'ny tambajotra @torproject ao Venezoelà. Toy izao ny fandosirana ilay sivana amin'ny fikarakarana ny Tor mba hampiasa an'ireo fiampitàna 43kl.
Raha jerena ny zava-misy, matroka ny tomban'ny fahalalahana miteny sy fahazoana vaovao ao anatin'ny firenena. Maro ireo Venezoeliàna manontany tena hoe toerana mediatika inona na fitaovan-tserasera inona no hosakanana manaraka… sy izay azon'izy ireo atao mba handravana ireo ezaky ny governemanta.
Però 3 andro izay